कश्मीर पाकिस्तानलाई दिन राजी थिए सरदार पटेल !
एजेन्सी । सन् २०१८ मा कश्मीरलाई भारतमा विलयप्रति सरदार पटेलको विचारबारे भारतमा प्रशासित काश्मिरका काँग्रेसी नेता सैफुद्धीन सोजको किताबमा गरिएको एक टिप्पणी निकै चर्चामा रहेको थियो ।
सोजका अनुसार यदी पाकिस्तान भारतको हैदरावाद दिन तयार रहेको छ भने सरदार पटेल पनि पाकिस्तानलाई कश्मीर दिन कुनै समस्या रहेको छैन ।
तर, के साँच्चिनै सरदार पटेल कश्मीर पाकिस्तानलाई दिन तयार रहेका थिए त ?
सोजले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् कि ‘कश्मीर अप्रेशन’का इन्चार्ज सरदार हयात खानको लर्ड माउटबेटनले सरदारलाई यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रस्तावका अनुसार सरदार पटेलको शर्त थियो कि यदी पाकिस्तान हैदरवाद दक्कन छोड्न तयार रहेको छ भने कश्मीर पाकिस्तानलाई दिन तयार रहेको छ । यो बुँदा कश्मीरः ग्लिम्प्स अफ हिस्ट्री द स्टोरी अफ स्ट्रगलको पेज १९९ मा लेखिएको छ ।
हयातले यो सन्देश पाकिस्तानका पहिलो प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानलाई पुर्याएका थिए ।
तब प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले भने,‘म पागल होइन । कश्मीर र त्यसको पत्थरका लागि एउटा यस्तो क्षेत्र (हैदरवाद) लाई गुमाउ जुन पञ्जावभन्दा पनि ठुलो छ ।’